Etu Oare Ehiemua si hibe ulo oru LabourHack na-eke ohere maka ndi omenaala na Nigeria
Etu otu Oare Ehiemua si hibe oru LabourHack na emeputa ohere maka ndi omenaala na Nigeria
Na Naịjirịa, ọtụtụ ndị na-ele ndị omenkà anya na-enweghị obere obi abụọ na ọbụnadị enweghị ntụkwasị obi. Dị ka onye ọ bụla na-ese okwu na otu nwere ike ịgba akaebe, igo ndị omenkà na-ewe ọtụtụ ọrụ, ọkachasị mgbe ị dabara n'aka onye ọrụ aka na amachaghị nke ọma.
Leverage technology, olee otu a ga-esi zụọ ndị omenkà ọzọ iji zụlite omume kacha mma na ọrụ ha? Kedụ ka ndị ahịa ga-esi nweta ọrụ nke ndị ọrụ aka dị elu, ndị ọkachamara na ndị ọrụ ntụkwasị obi?
Azịza dị mfe nye ajụjụ abụọ ahụ bụ Ọrụ, otu ikpo okwu jikọrọ ọnụ nke na - ejikọ ndị omenkà na ezinụlọ na azụmaahịa dị na Naịjirịa.
Onye obia anyi maka izu nke a mbipụta bụ Oare Ehiemua, onye guzobere LabourHack onye ya na ya nọ njem mbido.
You nwere ike ịgwa anyị gbasara onwe gị na azụmaahịa gị?
Enwere m mmasị mgbe niile banyere mmepe ndị mmadụ. M tolitere na-achọ ịlele ọnụ ọgụgụ dị elu nke enweghị ọrụ na mba ahụ wee gwa m mkpebi m n'isi mbido ọrụ m ịbanye na nchịkwa mmadụ nke m mere ihe dị ka afọ isii.
M wee pụọ gawa ime a Nna-ukwu na England dị nnọọ ka mụbaa uche m na mgbe m laghachiri n'ụlọ, M nọrọ ihe dị ka afọ anọ na a nzuzo hara nhatanha ike tupu ịmalite a-abụghị maka uru nzukọ. Naanị m gbanwere na LabourHack mgbe nke ahụ gasịrị.
Amalitere m na-agba ọsọ na nzukọ na-abaghị uru nke na-azụ ndị ọrụ aka. Anyị malitere na 2019 na echiche bụ ịzụ a di na nwunye nke eletriki, ọkwa nkà, na ihe ndị dị otú ahụ ma chọta ọrụ ntinye maka ha na-enweta ha ịnweta omume kachasị mma na teknụzụ na-eduga.
Anyị mechara zụọ ndị otu ọzụzụ ole na ole mbụ anyị mgbe anyị chọpụtara na ọ dịghị mfe ịchọta ohere itinye ha n'ọrụ. Nke a juru anyị anya n’ihi na ebe a bụ Naijiria ebe ndị mmadụ na-eme mkpesa mgbe nile na enwere obere ọdọ mmiri a zụrụ azụ maka ndị omenkà na otu o siri sie ike ịchọta ndị tozuru etozu.
Mgbe anyị chọpụtara na enweghị ezigbo ikpo okwu a na-ahụ anya nke na-enye ogo dị elu, nyocha, na ndị omenkà zụrụ azụ ụdị ohere ndị a na-aga n'ihu, nke metụtara mkpebi m ịmalite LaborHack.
LabourHack bu uzo eji eme ihe nke na ejiko ndi oru aka na ulo na ulo oru na Nigeria.
Gịnị kpaliri gị ịmalite LabourHack?
Ọ bụ n'ezie, dịka m kwuru, echiche bụ na ugbu a ụlọ ọrụ na ezinụlọ enweghị ohere ịnweta ọdọ mmiri ndị omenkà na-achọ ka ha rụọ ọrụ maka ha.
Hụ na ọ dị mkpa igwu site na nnukwu ọdọ mmiri ndị ọrụ nka anyị nwere na Nigeria iji mata ndị nke dị ezigbo mma, LabourHack na-ahụ na ị nwere ike ịnweta ha mgbe ịchọrọ.
Ihe anyị na-anwa ime bụ naanị iji mepụta njikọ dị n'etiti onye ahịa na ndị ọrụ aka ndị raara onwe ha nye ịrụ ọrụ achọrọ, ndị na-akpọ oku ma dịnụ mgbe ọ bụla mkpa bilitere.
Any ha na-aga n'ụlọ ha.
Ndi ndabere gị nyere aka na mkpebi gị ịhọrọ ọrụ na teknụzụ? Ma ọ bụrụ otú ahụ n'ụzọ dị a ?aa?
Nzụlite m nwere ike ọ bụghị. Amalitere m na nchịkwa mmadụ. Anaghị m abanye na teknụzụ. Agaghị m ọmụmụ ihe na-etolite, yabụ nke a bụ ohere ọhụụ maka m, mana ọ bụ oghere na-atọ ụtọ.
M ga-asị na m ga-eme ọtụtụ nwudo n'afọ gara aga ma ọ bụ karịa, naanị ịnwa ịghọta ihe teknụzụ bụ yana otu esi eji ya nke ọma maka azịza m na-achọ inye.
Anyị na-ahụ naanị na njikọ nke ndị ahịa anyị na-eme ka ọ dị mma ma na-arụ ọrụ nke ọma. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe teknụzụ na-emere anyị ma anyị na-eji teknụzụ eme ihe n'ihi ebumnuche anyị ịbawanye oke ọrụ anyị gafere Naịjirịa wee rute Africa.
O lee ka o si diri gi oru na ebe umu nwanyi pere mpe na onu ogugu?
Echere m maka m, ihe ngosi pụtara ìhè nke m chọpụtara bụ na enweghị ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị nlereanya na ị nwere ike ile anya na ohere. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike inweta ọtụtụ n’ime ha na mbara igwe, nke ahụ ga-eme ka ọ dịrị ụmụnwanyị na-eto eto mfe karị bụ ndị na-achọ otu ụzọ ahụ iji nweta ụdị ntụzịaka na nkwado ha chọrọ.
Ọ bụkwa ihe ịma aka nye ụmụ nwanyị ndị ọchụnta ego na mbara igwe iji hụ na ha na-ele anya ma gbalịa inyere ndị ọzọ nọ na njem aka.
Enwere ọtụtụ ihe na - enye aka na ihe kpatara nwanyị nwere ike ghara ịmịcha nke ọma ma ọ bụ ime nke ọma na mbara igwe mana echere m na ihe ndị ahụ niile na - agbada ịhọrọ na njedebe nke ụbọchị na ihe ndị dị mkpa anyị na - etinye n'ihe anyị weere dị ka ihe dị mkpa isi ihe ahụ n'oge.
Ihe ịma aka ndị ahụ nwere ike ịnwa ịmepụta arụ ọrụ ndụ, egwu nke ịghara ịdị mma, ma ọ bụ na ị na-asọ mpi na otu ụmụ nwoke na-ejide ọnọdụ kachasị elu na mgbochi uche ndị ọzọ anyị na-etinye na onwe anyị.
Echere m na ọ bụ oge anyị nwere ike ịhapụ nke ahụ wee bido ịmalite obodo nke ụmụ nwanyị siri ike ma na-akwado ibe anyị na oghere.
Kedu ndụmọdụ ị ga - enye ụmụ agbọghọ ndị chọrọ ịtụle ọdịnihu na teknụzụ?
Aga m asị na ha kwesịrị ịga maka ya. Ọ bụrụ na ị nwere echiche ma ị kwenyesiri ike na ya mgbe ahụ ọ bụ etu azụmahịa ma ọ bụ azụmaahịa ọ bụla si amalite, ọ na-amalite site n'echiche.
Gaa n'ihu, mepee echiche gị, chọta ezigbo akụrụngwa iji wuo azụmahịa gị.
Soro ndị ghọtara ihe ị na-achọ ime gbara onwe ha gburugburu ma na-emesapụ aka oge ha na akụrụngwa ha iji kwado gị n'ụzọ.
Echela na ị nọ naanị gị n'ihi na ị nọghị ya, enwere ụmụ nwanyị ndị ọzọ nọ n'ọgba ahụ, lelee ha ma jikọọ ha. Naanị gaa maka ya ma ọ nweghị ihe ị na - enweghị ike ịrụ site na ịrụsi ọrụ ike, were isi mmụta sitere na nsogbu ma na - eto eto.